RIKOODH: Mohamed Salah Oo Dhigay Rikoodh Cusub Kaddib Goolkii Uu Ka Dhaliyey Newcastle - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRIKOODH: Mohamed Salah Oo Dhigay Rikoodh Cusub Kaddib Goolkii Uu Ka Dhaliyey Newcastle
RIKOODH: Mohamed Salah Oo Dhigay Rikoodh Cusub Kaddib Goolkii Uu Ka Dhaliyey Newcastle
Xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah ayaa dhigay rikoodh aanu uga horreynin ciyaartoy kale oo Liverpool ah oo dhinaca gool-dhalinta ah, kaddib markii uu saxeexay gool kulankii ay kooxdiisu barbarraha 1-1 ah la gashay Newcastle United.
Mohamed Salah ayaa isku qoray buugga taariikhda Liveprool, waxaanu noqday ciyaartoygii ugu horreeyey ee Liverpool ka tirsan ee saddex xilli ciyaareed oo kala duwan min 20 gool iyo ka badan ka dhaliya horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League.
Laacibkan ayaa dhaafay rikoodhkii gool-dhalinta ee Robbie Fowler, Luis Suarez iyo Fernando Torres, waxaana in uu dhaafo rikoodhkooda ka caawiyey goolkii uu maanta ka dhaliyey Newcastle.
Saddexdan laacib oo dhaliyey goolal badan waqtiyadii ay joogeen Liverpool, ayaanu midkoodna awoodin in uu saddex xilli ciyaareed oo kala duwan dhaliyo min 20 gool iyo ka badan.
Salah ayaa rikoodhkiisa xaqiijistay daqiiqaddii 3aad ee bilowga ciyaartii Newcastle oo goolka madiga ah ee kooxdiisa uu saxeexay, waxaana uu noqday laacibkii ugu horreeyey ee taariikhda Liverpool ah ee tiro goolal ah oo intaas le’eg dhaliya xilli ciyaareedyo kala duwan.
28 jirkan ayaa tirada goolashiisa sii kordhisan kari lahaa, waxaase loogu daw-galay goolhaye Martin Dubravka iyo difaaca Newcastle oo ka diiday inuu goolal kale dhaliyo.
Mohamed Salah oo ay Liverpool kala soo wareegtay Roma sannadkii 2017, ayaa waxa uu xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey dhaliyey 44 gool oo dhamaan tartamada ah, kuwaas oo 32 ka mid ah ay ahaayeen horyaalka Premier League, isagoo isla xilli ciyaareedkaasna ku guuleystay abaal-marinta kabta dahabka ah ee Golden Boot.
Xilli ciyaareedkii xigay ayuu Salah saxeexay 22 gool oo Premier League ah, waxaanay isku mid noqdeen Sadio Mane iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo ay si wada jir ah ugu guuleysteen Kabta dahabka ah.
Salah ayay u tahay xilli ciyaareedkiisii saddexaad ee uu tiro 20 gool iyo ka badan saxeexo, waxaana uu rajaynayaa in kabta dahabka uu kula dagaallamo weeraryahanka Tottenham ee Harry Kane oo 21 gool dhaliyey.
Si kastaba, Mohamed Salah ayaa 198 ciyaarood oo uu u saftay Liverpool waxa uu u dhaliyey 123 gool.